I-Luxurious 1 Br iseduze kakhulu ne-MRT - I-Airbnb
I-Luxurious 1 Br iseduze kakhulu ne-MRT
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Bella
Indlu enkulu yokulala eyi-1 enkabeni yedolobha. eduze kakhulu neFerrer park Mrt Exit F ephambana nomzila wamahora angama-24 esitolo somnyango saseMustapha. Ifulethi lonke lihlanganisa ikhishi elifakwe ngokuphelele, umshini wokuwasha, Iqhwa, amahora angama-24 agijima amanzi ashisayo, i-shampoo, ukugeza umzimba, ikhithi yamazinyo izonikezwa. Ukugcinwa kwendlu kwansuku zonke, ukugeza okusha Kunikezwe. Umgcini wendlu ozinikezele esizeni kusukela ngo-9.30 ekuseni kuze kube ngu-6.30 ntambama ngaphandle kwamaSonto.
I-wifi eqinile, i-TV yekhebula eneziteshi ezingaphezu kuka-350 zamazwe ngamazwe.
Ukuhamba ibanga lemizuzu emi-3 ukusuka eFerrer park uMrt exit F
okuphambana ne-24 Hrs Mustapha Shopping Centre. Eduze kwase-KKH kanye neSibhedlela saseFerrer park. I-City square mall enezitolo ezinkulu ezi-2 & nenkundla yokudla iseduze kwamamitha angu-200 ukuhamba.1 Mrt Stop away from SMU.
Eduze kwezindawo eziningi zokudlela ezihamba eceleni kanye nenkundla yokudla, imakethe emanzi, isikhungo se-Hawker, inxanxathela yezitolo, Isitolo soMnyango, Eduze neMosque kanye nethempeli laseNdiya, isitobhi sebhasi sisekhoneni kanjalo nesitobhi samatekisi, uMrt ungamamitha ayi-100. ngokuhamba.
Itholakala 24x7 nge-whatsapp kanye ne-Airbnb App. Umsizi wasendlini ozinikezele ukhona nsuku zonke kusukela ngo-9.30 ekuseni kuya ku-6.30 ntambama ngaphandle kwamaSonto.